Apple ရဲ့ 6.1" LCD iPhone က ဝယ်ဖို့ တန်ပါ့မလား?
Apple ရဲ့ 6.1″ LCD iPhone က ဝယ်ဖို့ တန်ပါ့မလား?
29 Aug 2018 . 2:25 PM
အခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့ လာမယ့် စက်တင်ဘာလမှာ Apple ကနေ iPhone အသစ်တွေကို မိတ်ဆက်တော့မယ်ဆိုတာကို လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်နေလောက်ပါပြီ။ ဒီနှစ်မှာလည်း Apple ကနေ iPhone ကို ၃ မျိုး ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ 5.8″ နဲ့ 6.5″ OLED Display အသုံးပြုထားတဲ့ High End iPhone အသစ် ၂ မျိုးအပြင် 6.1″ LCD Display ကို အသုံးပြုထားတဲ့ iPhone ကိုပါ ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခု OLED Display ကို အသုံးပြုထားတဲ့ iPhone အသစ်တွေက လက်ရှိ iPhone X ရဲ့ မျိုးဆက်သစ် စမတ်ဖုန်းတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပေမယ့် 6.1″ LCD iPhone ကတော့ Budget Model ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ လက်ရှိ iPhone တွေထဲမှာ ဈေးနှုန်းအရ အသက်သာဆုံးဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ခန့်မှန်းအနေနဲ့ကတော့ ဒေါ်လာ ၆၀၀ နဲ့ ၇၀၀ ကြားရှိလာနိုင်မယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
အခု Apple ရဲ့ Budget iPhone ဖြစ်လာမယ့် 6.1″ LCD iPhone က တကယ်ရော ဒေါ်လာ ၆၀၀ နဲ့ ၇၀၀ ဝန်းကျင်ဖုန်းတွေထဲမှာ ဝယ်ယူဖို့တန်တဲ့ ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်လာမလား? ဈေးပိုကြီးတဲ့ OLED Display iPhone အသစ်တွေနဲ့ ယှဉ်ရင်ရော ဘာတွေကွာခြားသွားနိုင်မလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်လား။
ပိုပြီး နိမ့်နေတဲ့ Display နဲ့ Resolution
Apple ရဲ့ ဒီ Budget iPhone ဟာ 6.1″ LCD Display ကိုပဲ အသုံးပြုလာမယ်ဆိုတာက သေချာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် နည်းပညာပိုင်းအနေနဲ့လည်း ပိုကောင်းတဲ့ OLED iPhone တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် Color Accuracy ပိုင်းနဲ့ Contrast ပိုင်းမှာ ကွာခြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ Resolution ပဲဖြစ်ပါတယ်။
iPhone သတင်းတွေကို ပြောနေကြ KGI Securities ရဲ့ Ming-Chi Kuo ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ LCD iPhone ဟာ Resolution အနေနဲ့ 1792×828 Pixel ရှိတဲ့ Resolution ကိုပဲ အသုံးပြုထားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် 5.8″ အရွယ်ပဲရှိတဲ့ OLED Display ရဲ့ 2436×1125 Pixels Resolution ကိုတောင်မမှီသလို 6.5″ အရွယ် အကြီးဆုံး OLED Display iPhone ရဲ့ 2688×1242 Pixels Resolution နဲ့ ယှဉ်ရင် သိသိသာသာကွာခြားသွားမှာပါ။
iPhone အသစ်တွေထဲမှာ အနည်းဆုံးဖြစ်လာမယ့် Battery
Apple ဟာ 5.8″ OLED iPhone အသစ်မှာ 2800mAh Battery နဲ့ 6.5″ OLED iPhone မှာတော့ 3400mAh Battery ကို တပ်ဆင်လာမယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 6.1″ LCD iPhone မှာကတော့ ပိုပြီးတောင် နည်းပါးတဲ့ Battery ပါလာဖို့ များလာပါတယ်။ လက်ရှိ သိရတဲ့သတင်းတွေအရ 6.1″ LCD iPhone က Battery Capacity အနေနဲ့ 2600mAh ဒါမှမဟုတ် 2700mAh Battery ပဲပါဝင်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်ကြီးမားတဲ့ 6.1″ အရွယ်အစားရှိနေပြီး OLED Display လောက် Power စားမသက်သာတဲ့ LCD Display က အခုလိုမျိုး သေးငယ်တဲ့ Battery နဲ့ဆိုတော့ Battery ခံပါ့မလားဆိုတာက မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။
လျော့ထားတဲ့ Storage နဲ့ RAM
Apple ရဲ့ OLED iPhone အသစ်တွေဟာ RAM 4GB ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Storage အနေနဲ့လည်း 512GB အထိ ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 6.1″ LCD iPhone အသစ်မှာကတော့ RAM 3GB ပဲ ပါဝင်ပြီးတော့ Storage ကလည်း 256GB အထိပဲ ရရှိမှာပါ။ အဲ့ဒီအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာတော့ အရမ်းသိသာမှာမဟုတ်ပေမယ့် အနည်းငယ်တော့လျော့နည်းဦးမှာပါ။
ပိုမြန်တဲ့ Wi-Fi ကို Upgrade ပြုလုပ်လာမှာ မဟုတ်ခြင်း
Apple ဟာ ဒီနှစ်ရဲ့ OLED iPhone တွေကို 4×4 MIMO 802.11ac WiFi ကို Upgrade ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Wi-Fi လိုင်းဆွဲအားပိုကောင်းလာမှာဖြစ်သလို Wi-Fi Speed ကလည်း ပိပြီး မြန်ဆန်လာတော့မှာပါ။ ဒါပေမယ့် 6.1″ LCD iPhone မှာကတော့ ဒီ Wi-Fi အဆင့်မြှင့်တင်မှုကို ရရှိမှာမဟုတ်ဘဲ ပုံမှန် 2×2 MIMO Wi-Fi ကိုပဲ အသုံးပြုနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Dual Camera မပါဝင်ခြင်း
Apple ရဲ့ OLED iPhone အသစ် ၂ ခုစလုံးဟာ Dual Camera စနစ်ကို အသုံးပြုလာမှာဖြစ်ပြီး ယခင် iPhone7Series ၊ 8 Series တွေလိုမျိုး Plus Model မှာပဲ Dual Camera ပါတာမျိုး ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် 6.1″ LCD iPhone မှာတော့ Single Camera ပဲ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Dual Camera ရဲ့ 2x Telephoto လိုမျိုး လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။
ဒါကတော့ Apple ရဲ့ ဒေါ်လာ ၆၀၀ နဲ့ ၇၀၀ ဝန်းကျင်ရှိလာမယ့် 6.1″ LCD iPhone နဲ့ ဈေးပိုကြီးတဲ့ OLED iPhone အသစ်တွေနဲ့ အဓိကကွာခြားချက်တွေဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနိမ့်ဆုံး OLED iPhone အသစ်က ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ဝန်းကျင်က စတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အခု Budget LCD iPhone က ဒေါ်လာ ၃၀၀ လောက် သက်သာနေသေးတယ်ဆိုပေမယ့် ဈေးသက်သာသွားတာနဲ့ ယှဉ်ရင် လျော့သွားတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေက တန်ရဲ့လားဆိုတာကတော့ တကယ်တရားဝင်ကြေညာတဲ့အချိန်ကို စောင့်ကြည့်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်တာ ပိုအဆင်ပြေဦးမှာပါ။
အခုအခြိနျမှာဆိုရငျတော့ လာမယျ့ စကျတငျဘာလမှာ Apple ကနေ iPhone အသဈတှကေို မိတျဆကျတော့မယျဆိုတာကို လူတိုငျးသိပွီးဖွဈနလေောကျပါပွီ။ ဒီနှဈမှာလညျး Apple ကနေ iPhone ကို ၃ မြိုး ထုတျလုပျမှာဖွဈပွီးတော့ 5.8″ နဲ့ 6.5″ OLED Display အသုံးပွုထားတဲ့ High End iPhone အသဈ ၂ မြိုးအပွငျ 6.1″ LCD Display ကို အသုံးပွုထားတဲ့ iPhone ကိုပါ ထုတျလုပျမှာဖွဈပါတယျ။
အခု OLED Display ကို အသုံးပွုထားတဲ့ iPhone အသဈတှကေ လကျရှိ iPhone X ရဲ့ မြိုးဆကျသဈ စမတျဖုနျးတှဖွေဈလာမှာဖွဈပမေယျ့ 6.1″ LCD iPhone ကတော့ Budget Model ဖွဈလာမှာဖွဈပွီးတော့ လကျရှိ iPhone တှထေဲမှာ စြေးနှုနျးအရ အသကျသာဆုံးဖွဈလာမှာပဲဖွဈပါတယျ။ လကျရှိ ခနျ့မှနျးအနနေဲ့ကတော့ ဒျေါလာ ၆၀၀ နဲ့ ၇၀၀ ကွားရှိလာနိုငျမယျလို့ သတငျးတှထှေကျပျေါနပေါတယျ။
အခု Apple ရဲ့ Budget iPhone ဖွဈလာမယျ့ 6.1″ LCD iPhone က တကယျရော ဒျေါလာ ၆၀၀ နဲ့ ၇၀၀ ဝနျးကငျြဖုနျးတှထေဲမှာ ဝယျယူဖို့တနျတဲ့ ဖုနျးတဈခုဖွဈလာမလား? စြေးပိုကွီးတဲ့ OLED Display iPhone အသဈတှနေဲ့ ယှဉျရငျရော ဘာတှကှောခွားသှားနိုငျမလဲဆိုတာကို လလေ့ာကွညျ့ရအောငျလား။
ပိုပွီး နိမျ့နတေဲ့ Display နဲ့ Resolution
Apple ရဲ့ ဒီ Budget iPhone ဟာ 6.1″ LCD Display ကိုပဲ အသုံးပွုလာမယျဆိုတာက သခြောနပွေီပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ နညျးပညာပိုငျးအနနေဲ့လညျး ပိုကောငျးတဲ့ OLED iPhone တှနေဲ့ ယှဉျရငျ Color Accuracy ပိုငျးနဲ့ Contrast ပိုငျးမှာ ကှာခွားမှာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီထကျပိုတဲ့အခကျြတဈခုကတော့ Resolution ပဲဖွဈပါတယျ။
iPhone သတငျးတှကေို ပွောနကွေ KGI Securities ရဲ့ Ming-Chi Kuo ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရ LCD iPhone ဟာ Resolution အနနေဲ့ 1792×828 Pixel ရှိတဲ့ Resolution ကိုပဲ အသုံးပွုထားမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ 5.8″ အရှယျပဲရှိတဲ့ OLED Display ရဲ့ 2436×1125 Pixels Resolution ကိုတောငျမမှီသလို 6.5″ အရှယျ အကွီးဆုံး OLED Display iPhone ရဲ့ 2688×1242 Pixels Resolution နဲ့ ယှဉျရငျ သိသိသာသာကှာခွားသှားမှာပါ။
iPhone အသဈတှထေဲမှာ အနညျးဆုံးဖွဈလာမယျ့ Battery
Apple ဟာ 5.8″ OLED iPhone အသဈမှာ 2800mAh Battery နဲ့ 6.5″ OLED iPhone မှာတော့ 3400mAh Battery ကို တပျဆငျလာမယျလို့ သတငျးထှကျပျေါနတောပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ 6.1″ LCD iPhone မှာကတော့ ပိုပွီးတောငျ နညျးပါးတဲ့ Battery ပါလာဖို့ မြားလာပါတယျ။ လကျရှိ သိရတဲ့သတငျးတှအေရ 6.1″ LCD iPhone က Battery Capacity အနနေဲ့ 2600mAh ဒါမှမဟုတျ 2700mAh Battery ပဲပါဝငျမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျကွီးမားတဲ့ 6.1″ အရှယျအစားရှိနပွေီး OLED Display လောကျ Power စားမသကျသာတဲ့ LCD Display က အခုလိုမြိုး သေးငယျတဲ့ Battery နဲ့ဆိုတော့ Battery ခံပါ့မလားဆိုတာက မေးခှနျးထုတျစရာပါ။
လြော့ထားတဲ့ Storage နဲ့ RAM
Apple ရဲ့ OLED iPhone အသဈတှဟော RAM 4GB ပါဝငျမှာဖွဈပွီးတော့ Storage အနနေဲ့လညျး 512GB အထိ ရှေးခယျြနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ 6.1″ LCD iPhone အသဈမှာကတော့ RAM 3GB ပဲ ပါဝငျပွီးတော့ Storage ကလညျး 256GB အထိပဲ ရရှိမှာပါ။ အဲ့ဒီအတှကျ စှမျးဆောငျရညျပိုငျးမှာတော့ အရမျးသိသာမှာမဟုတျပမေယျ့ အနညျးငယျတော့လြော့နညျးဦးမှာပါ။
ပိုမွနျတဲ့ Wi-Fi ကို Upgrade ပွုလုပျလာမှာ မဟုတျခွငျး
Apple ဟာ ဒီနှဈရဲ့ OLED iPhone တှကေို 4×4 MIMO 802.11ac WiFi ကို Upgrade ပွုလုပျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ Wi-Fi လိုငျးဆှဲအားပိုကောငျးလာမှာဖွဈသလို Wi-Fi Speed ကလညျး ပိပွီး မွနျဆနျလာတော့မှာပါ။ ဒါပမေယျ့ 6.1″ LCD iPhone မှာကတော့ ဒီ Wi-Fi အဆငျ့မွှငျ့တငျမှုကို ရရှိမှာမဟုတျဘဲ ပုံမှနျ 2×2 MIMO Wi-Fi ကိုပဲ အသုံးပွုနိုငျဦးမှာဖွဈပါတယျ။
Dual Camera မပါဝငျခွငျး
Apple ရဲ့ OLED iPhone အသဈ ၂ ခုစလုံးဟာ Dual Camera စနဈကို အသုံးပွုလာမှာဖွဈပွီး ယခငျ iPhone7Series ၊ 8 Series တှလေိုမြိုး Plus Model မှာပဲ Dual Camera ပါတာမြိုး ရှိတော့မှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ 6.1″ LCD iPhone မှာတော့ Single Camera ပဲ ပါဝငျမှာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ Dual Camera ရဲ့ 2x Telephoto လိုမြိုး လုပျဆောငျခကျြတှကေို အသုံးပွုနိုငျမှာမဟုတျပွနျပါဘူး။
ဒါကတော့ Apple ရဲ့ ဒျေါလာ ၆၀၀ နဲ့ ၇၀၀ ဝနျးကငျြရှိလာမယျ့ 6.1″ LCD iPhone နဲ့ စြေးပိုကွီးတဲ့ OLED iPhone အသဈတှနေဲ့ အဓိကကှာခွားခကျြတှဖွေဈလာမှာပဲဖွဈပါတယျ။ အနိမျ့ဆုံး OLED iPhone အသဈက စြေးနှုနျးအနနေဲ့ ဒျေါလာ ၁၀၀၀ ဝနျးကငျြက စတငျမှာဖွဈတဲ့အတှကျ အခု Budget LCD iPhone က ဒျေါလာ ၃၀၀ လောကျ သကျသာနသေေးတယျဆိုပမေယျ့ စြေးသကျသာသှားတာနဲ့ ယှဉျရငျ လြော့သှားတဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှကေ တနျရဲ့လားဆိုတာကတော့ တကယျတရားဝငျကွညောတဲ့အခြိနျကို စောငျ့ကွညျ့ပွီးမှ ဆုံးဖွတျတာ ပိုအဆငျပွဦေးမှာပါ။